Abavelisi beMveliso kunye neFektri | Abavelisi beMveliso base China
Rexroth uthotho fracturing iindawo impompo
Indlovu yeFluid Power: Nikezela ngeRexroth uthotho lwamalungu eempompo zeHydraulic, iinxalenye zokuqala zempompo yeOEM kunye neepompo ezincedisayo zomzi-mveliso.
Elephants Fluid Power
Okwangoku, iiBrand ezithandwayo kwiiHydraulic nguDanfoss, uChar Lynn, M + S, HANJIU, nganye inezinto zayo, nangona kunjalo isizathu sokuba abathengi abaninzi bekhetha iHANJIU kungenxa yokuba inezibonelelo ezicacileyo kunezinye iimveliso ngokubhekisele kunikezelo, inkonzo, umgangatho kunye nereyithi yenzuzo.
Isantya esisezantsi ii-motor torque
Iimoto ezihamba ngesanti kubunzulu baphantsi
Iarhente kwaye sisasaza uphawu lwehlabathi oludumileyo "HANJIU" ii-motor hydraulic.
I-6E6474 Hydraulic Pump Buyisela iCartridge yoLayishe ivili
Senziwe ngokuveliswa ngamanzi, Sivelisa kwaye sibonelela kuphela ngomgangatho ophezulu, izinto ezingasasebenziyo ezinokuthenjwa. Isizathu sokuba abathengi abangakumbi nangakumbi bakhethe i-US kungenxa yokuba inezibonelelo ezicacileyo kunezinye iimveliso ngokubhekisele kunikezelo, inkonzo, umgangatho kunye nomda ongaphezulu.
HANJIU series hydraulic Orbitrol ulawulo esungulayo iyunithi
Kubandakanywa ivalve edityanisiweyo (ivalve yokunceda kunye nevalve engakhangeliyo), Buyisela iDanfoss (ospc), M + S (HKU / 4) uthotho.
Indlovu yeFluid Power ibonelela ngezixhobo zokumpompa kwe-Caterpillar ngezibonelelo zexabiso elifanelekileyo, ukuhanjiswa okukhawulezileyo kunye ne-oem esemgangathweni.
I-F-201346 kukuthwala kwempompo yeplanga yeRexroth A4VG125. Indlovu yeFluid Power ibonelela ngempompo ye-hydraulic plunger pump. Iibheringi zentsusa ziyafumaneka ngamaxabiso afanelekileyo kwaye zithunyelwa ngaphakathi kweentsuku ezi-5.